Trump oo hakinaya shaacinta waxa ay ku wada hadleen madaxda adduunka - BBC News Somali
Trump oo hakinaya shaacinta waxa ay ku wada hadleen madaxda adduunka
26 Luulyo 2018
Maamulka Trump ayaan mardambe shaacin doonin waxa ay kawada hadlaan Trump iyo madaxda kale ee dunida, sidaasi waxaa soo warinayaa warbaahinada Mareykanka.
Waxaa qoraalada loo qeybin doonaa wakaaladaha wararka balse war saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegi doona faah-faain xadidan.
Markii hore, madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynayaasha kale ee dunida ayaa la shaacin jiray waxyaabaha ay taleefoonka kaga wada hadalaan.
Aqalka cad ayaan sheegin sababaha ay isbedelkaan u sameeynayaan.
Maamulka Trump ayaan wax jawaab ah ka bixin isbedelka ay soo tabiyeen warabaahinada Mareykanka.
Dadka wax dhaleeceya ayaa tallabadan ugu dambeysay oo uu qaaday maamulka Trump ku tilmaamay mid ka soo horjeedda daahfurnaanta, inkastoo warbaahinta CNN ay soo werineyso in aysan weli cadayn in isbedelkaan uu yahay mid joogta ah.
Warbixinta telefoonka ee madaxda ee loo soo bandhigayo bulshada ayaa qeyb ka ahayd maamuladii xisbiyada Dimuqraadiga iyo Republican-kaba.
Wicitaan u dhaxeeyay Ra'isalwasaaraha Pakistan Nawaz Sharif iyo madaxweyne Trump ayaa sharaxaya farqiga u dhaxeeya sida labada dal ay faafaahin uga bixiyeen wicintaankaasi. Pakistaan ayaa qoraalka ay soo badhigatay ee ku aadan wicitaanka ayaa waxaa aad loogu faafaahiyay aamaanta uu Mr Trump aamanay pakistaan iyo Mr Sharif halka tan Mareykanka aan faafaahin badan laga bixin.
Aqalka looga arrimiyo Britain ayaa website-ka dowladda inta badan ku shaaciya wicitaanka ra'salwasaaraha Britain iyo madaxda wadamada kale, inkastoo aysan aad u faafaahsanayn.
Qoraalkii ugu dambeeyay ee laga soo saaro aqalka cad ayaa ka koobnaa saddex jumladood oo kaliya, Kaas oo soo baxay 16-kii June oo u dhaxeeyay Trump iyo ra'salwasaaraha Hungary Viktor Orban.
Wargeyska Washington Post ayaa bishaan soo weriyay in madaxweynaha uu nambarka telefoonkiisa siinayay madaxda wadamada kale tan iyo intii uu ahaa madaxweynaha Mareykanka.
Bishii April, sarkaal sare ayaa wargeyska u sheegay "in aysan wax war ah ka hayn" wicitaan dhexmaray ra'salwasaaaha Kanada Justin Trudeau iyo Mr Trump, ayna markii dambe ku ogaadeen kadib markii ay Canada shaacisay.
Wargeyska ayaa sidoo kale qoray faafaahin wicitaano oo dhexmaray madaxweyne Trump iyo mdaxweyneyaasha Mexico iyo Australia, kaas oo la sheegay in uu ka carooday madaxweynaha Mareykanka.
Markaa wixii ka dambeeyay, madaxweynaha waxa uu telefoon kula hadlay ra'isalwasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Warbaahinada ajinabiga ah ayaa markii hore soo weriyay wicitaankan, kadibna waxaa xaqiijiyay aqalka cad base wax faafaahin ah kama aysan bixin.
Siyaasiyinta waxa ay jecelyihiin hufnaanta marka ay ugu haboontahay. Haseyeeshee labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxbaa isbedelay oo sharcigii ayaa labial marya.
Aqalka cad ayaa sheegay in aysan mardambe shaacin doonin warbxinada ku saabsan wadadahadalada telefoonka ee dhexmara Mr Trump iyo madaxda wadamada kale.
Waa muhiim in marwalba lais barbardhigo waxa ay dhahaan aqalka looga arrimiyo Ruushka ee Kremlin iyo aqalka cad ee Mareykanka, haddase masii jiri doonto in arrintaa la sameeyo.
Maamulka Trump ayaa sidoo kale wajahay dalabaadyo ah in la baahiyo codadkii laga duubay shirkii dhexmary Trump iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
Maxay ka yirahdeen dadka waxa dhaleeceeya?
La taliyihii hore aminga ee qaranka Samantha Vinograd ayaa shaacinta wicitaanada ku tilmaantay in ay yihiin farsamo muhiim ah, loona baahanyahay in aqalka cad uu dadka usoo bandhigo sabato ah madaxda kalaba marka ay wadahadlaan kadib, shacabkooda ayay usoo bandhigaan.
Waxaa sidoo kale baraha bulshada aad looga hadal hayaa isbarbadhigga Ruushka iyo Kuuriyada waqooyi.